Ny tilikambo herinaratra dia karazana rafitra vy izay mitazona elanelana azo antoka eo anelanelan'ny mpampita, ny tariby ary ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Avy amin'ny rafitra: tilikambo vy amin'ny zoro ankapobeny, tsatokazo fantsom-by ary tilikambo vy tery fantsona vy. Ny tilikambo vy zoro dia matetika ampiasaina any an-tsaha, ary ny tsatokazo fantsom-by vy sy ny tilikambo fantsom-by dia matetika ampiasaina amin'ny tanàn-dehibe satria kely kokoa noho ny tilikambo vy ny zoro.
Ny tilikambo vy misy zoro herinaratra dia karazana rafitra vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe ao anaty tsipika fandefasana. Araka ny endriny dia azo zaraina amin'ny karazany dimy izy amin'ny ankapobeny: tilikambo divay karazana tilikambo divay, tilikambo herin'ny saka saka, herinaratra karazana karazana, karazana maina ary karazana siny. Araka ny tanjona dia azo zaraina amin'ny tilikambo herinaratra karazana fihenjanana, tilikambo herinaratra mahitsy karazana, tilikambo karazana angovo ary tilikambo herinaratra transposition Ireo toetra mampiavaka ny tilikambo (fanoloana tilikambo amin'ny toeran'ny mpitaratra), tilikambo herinaratra ary fiampitana fahefana tilikambo dia ireo karazana tilikambo isan-karazany an'ny rafitra haben'ny habakabaka, ary ny mpikambana dia miorina amin'ny vy tokana mitovy zoro na vy zoro mitambatra. Q235 (A3F) sy Q345 (16Mn) dia matetika ampiasaina. Ny fifandraisana misy eo amin'ny mpikambana dia vita amin'ny fehikibo mafy, ary ny tilikambo iray manontolo dia ampifandraisin'ny vy zoro sy vy mampifandray Ny faritra sasany toy ny tilikambo dia ampidirina amina fivorian'ny vy maro. Noho izany dia mety amin'ny galvanizing mafana, anticorrosion, fitaterana ary fananganana izy io. Ho an'ny tilikambo izay latsaky ny 60m ny haavony, ny fantsika amin'ny tongotra dia apetraka amin'ny iray amin'ireo fitaovana lehibe ao amin'ny tilikambo hanamorana ny mpiasa mpanao trano hianika ilay tilikambo.
Manaraka: Tilikambo fifandraisana
Tilikambon'ny fifandraisana tsy misy fangarony
Tilikambon'ny serasera fifandraisana towerbelongs amin'ny karazana tilikambo fampitana signal, fantatra ihany koa amin'ny hoe signal transmitting tower na signal tower. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanohanana ny famantarana sy ny fanohanana ny fampitana antena. Izy io dia ampiasaina amin'ny sampan-draharaha misahana ny fifandraisana toa ny China Mobile, China Unicom, telecom, satellite satellite system (GPS). 1 、 Toetra mampiavaka sy fampiharana ny tilikambon'ny fifandraisana 1. Tilikambon'ny fifandraisana: mizara ho tany ...
Tilikambon'ny tontolon'ny fifandraisana
Tantaran-tserasera fifandraisana Tilikambon'ny tontolon'ny serasera dia misy ny tilikambo fifandraisana an-tanety mahazatra ary ny fanamafisana ny tilikambo. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny tilikambo fahitana mahazatra rehetra ankehitriny. Izy io dia ny fampifangaroana tanteraka ny tilikambon'ny serasera mahazatra sy ny hatsaran-tarehy antena miafina, ary ny fanitarana sy ny fampandrosoana ny vokatra avy amin'ny orinasanay mankany amin'ny làlana avo kokoa; Ny hevi-dehibe dia ...
Tilikambo vy anggoro elektrika, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Tilikambo famindrana angovo vy, Rafitra vy amin'ny Tube, Firafitra Steel Prefab,